Ny Ethiopian Airlines sy ny seranam-piaramanidina Liege dia manitatra ny fifanarahana fiaraha-miasa
Home » Lahatsoratra farany farany » Airlines » Ny Ethiopian Airlines sy ny seranam-piaramanidina Liege dia manitatra ny fifanarahana fiaraha-miasa
Airlines • Airport • Vaovao Mafana Belzika • Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao farany momba an'i Ethiopia • Vaovao • fanorenana • tompon'andraikitra • Tourism • Fitaterana • Travel Wire News • Vaovao isan-karazany
Ny seranam-piaramanidina Liege, seranam-piaramanidina enta-mavesatra lehibe indrindra any Belzika ary seranam-piaramanidina enta-lehibe enina lehibe indrindra any Eropa, dia mbola hitohy ho ivon-tseranan'i Ethiopian Airlines ho vavahady mpitatitra entana eo amin'i Afrika sy Eropa mandritra ny dimy taona ho avy.
Etiopiana Airlines Cargo and Logistics Services dia niara-niasa tamin'ny seranam-piaramanidina Liege ho an'ny asa vaventy misy azy eo amin'i Afrika sy Eropa.
Miara-miasa amin'ny seranam-piaramanidina Liege, ny serivisy fitaterana entana sy fitaovam-piadiana etiopiana dia manome serivisy fitaterana entana haingana sy azo antoka manerana an'i Eropa sy mihoatra ny 15 taona.
Amin'ny ho avy dia misy foibe fanoloran-tena natokana ho an'ny Liege Avaratra, izay ny etiopiana no mpanjifa fanombohana hanombohana azy.
Serivisy fitaterana entana sy lozisialy Ethiopian Airlines ary Seranam-piaramanidina Liege dia nanambara fa nanavao ny fifanarahana fiaraha-miasa efa hatramin'ny ela izy ireo hatramin'ny 2026. Ny seranam-piaramanidina Liege, seranam-piaramanidina mpitondra entana lehibe indrindra any Belzika ary seranam-piaramanidina enta-lehibe enina lehibe indrindra any Eropa, dia mbola ho tobin'ny mpitatitra entana Ethiopian Airlines izay vavahady mpitatitra entana eo amin'i Afrika sy i Eropa ho an'ny manaraka dimy taona. Etiopiana Airlines Cargo and Logistics Services, mpiasan'ny tambajotram-pitaterana entana lehibe indrindra eto Afrika, dia niara-niasa tamin'ny seranam-piaramanidina Liege ho an'ny asa vaventy misy azy eo amin'i Afrika sy Eropa.
Serivisy fitaterana entana sy lozisialy Ethiopian Airlines Tale mpitantana misolo toerana, Andriamatoa Enquanhone Minyashal dia nilaza fa "Faly izahay nanavao ny fifanarahana fiaraha-miasa amin'ny seranam-piaramanidina mpiara-miasa efa hatry ny ela tamin'ny fotoana nanoratanay ny fitomboana lehibe amin'ny toerana fitaterana entana sy ny fahaizanay. Miara-miasa amin'ny seranam-piaramanidina Liege, Serivisy fitaterana entana sy lozisialy Etiopiana no nanolotra serivisy fitaterana entana haingana sy azo antoka manerana an'i Eoropa sy ny sisa tao anatin'izay 15 taona niarahany niasa tamim-pahombiazana. Ao anatin'ny dimy taona ho avy, hiasa izahay hanova ny asan'ny mpitatitra entana hanompoana an'i Eropa tsara kokoa amin'ny fanoloran-tena vaovao miaraka amin'ny seranam-piaramanidina Liege. Amin'ny maha mpitatitra afrikanina pan lehibe indrindra azy, ny Etiopiana Airlines dia hanohy hanamafy ny fiaraha-miombon'antoka amin'ny seranam-piaramanidina Liege hanamafisana ny asa vaventy misy azy eo amin'i Afrika sy Eropa.
Steven Verhasselt, VP Commercial an'ny seranam-piaramanidina Liege dia nilaza fa “Voalohany indrindra, ny seranam-piaramanidina Liege dia miarahaba ny Etiopiana Airlines sy ny mpiasa rehetra ary ny mpiara-miombon'antoka aminy tsingerintaona faha-75 feno fifaliana. Amim-pireharehana lehibe fa anisan'ny tantaran'ny fahombiazan'ny Etiopiana isika nandritra ny 15 taona lasa ary ny LGG dia mbola ho toby fitaterana entana an'ny Ethiopian Airline any Eropa. Raha mijery ny fiandohany ka hatramin'ny toerana misy antsika ankehitriny, i Etiopia dia efa nampandeha sidina mpitatitra entana 15,000 ho any LGG, manakaiky ny entana 1 tapitrisa taonina entina. Na izany aza, nanasongadina i Steven Verhasselt, ity no lasa ary azo raisina ho fanombohana tena mahavariana. Ankehitriny, mankalaza ny ho avy isika.
Etiopiana ary ny LGG dia nanavao ny fifanarahana fiaraha-miasa izay tsy vitan'ny hoe manamafy ny hub an'ny Cargo Eraopeana ao amin'ny LGG mandritra ny 5 taona ho avy fa milaza ihany koa fa ny Etiopiana dia ho lasa mihoatra ny zotram-piaramanidina manidina ao amin'ny LGG. Amin'ny ho avy dia misy foibe fanoloran-tena natokana ho an'ny Liege Avaratra, izay ny etiopiana no mpanjifa fanombohana hanombohana azy. Manantena fatratra an'ity dingana manaraka ity izahay izay hanampy ny Etiopiana hanompo tsara kokoa ny mpanjifany. Mihoatra noho ny taloha, LGG no ho ivon'ny Etiopiana ary vavahady mpitatitra entana lehibe manelanelana an'i Afrika sy Eropa. ”
Araka ny tatitry ny Africa Airlines Association (AFRAA), laharana voalohany i Etiopia tamin'ny alàlan'ny fivezivezena mpandeha sy ny entana tamin'ny taona 2020. Etiopiana nitondra mpandeha 500 taonina sy mpandeha 5.5 tapitrisa namakivaky ny foibeny lehibe, Addis Ababa Bole International Airport.